‘सैं पनि एमाले’की प्रियासहित बैकुण्ठ महतको गीति आग्रह- एकता तोडेर नजाऊ साथी हो ! – Nepal Press
‘सैं पनि एमाले’की प्रियासहित बैकुण्ठ महतको गीति आग्रह- एकता तोडेर नजाऊ साथी हो !
२०७७ माघ २० गते १६:२३
काठमाडौं । कुनैबेला थियो बद्री पंगेनीको जनवादी ट्रयाक ‘सैं पनि एमाले, मै पनि एमाले’ आन्दोलन र चुनावी अभियानमा हिट थियो । लाग्थ्यो, तत्कालिन एमालेको लागि यो एउटा ‘ब्रान्डेड गीत’ हो ।
एमाले दलको छाता मुनि आबद्धले यो गीत गाउँथे र एकाकार हुनुको महसुस गर्थे । अहिले भने समयले एकसय असी डिग्रीको कोल्टे फेरेको छ । नेकपा दल विभाजन भएपछि कला क्षेत्र पनि विभाजित भएको छ ।
फिल्म सेलेव्रिटी संसद विघटन र नेकपा विभाजनलाई दिएर यसअघि नै विभाजित छन् । अब भने पालो संगीत क्षेत्रको । केही जनवादी गायक-गायिकाले केपी ओलीको पक्षमा गीत निकालेका छन् । केहीले प्रचण्ड-नेपाल पक्षमा र केहीले गीतमार्फत एकताको पक्षमा शब्द पोखेका छन् ।
बद्री पंगेनीसँग ‘मै पनि एमाले, सहि पनि एमाले,’ गाएकी प्रिया भण्डारी नेकपा विभाजनपछि फेरि अर्को गीतमा देखिएकी छन् । बैकुण्ठ महतको ‘एकता तोडेर नजाऊ साथी हो’ गीतमा प्रियाले स्वर दिएकी छन् ।
शहिदको रगत र आकांक्षालाई धोका दिएर एकता नभाँड्न आग्रह गरिएको यो गीतले एकताको सन्देश दिन्छ । यसमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विकासका कामहरु गरिरहेको दृष्य देखाउँदै यस्तो प्रयासलाई अवरोध गर्न पार्टी विभाजन गर्न खोजिएको सन्देश दिन खोजिएको छ ।
गायिका कोमल ओलीले ‘केपी ओली’ बोलेको गीत युट्युवमा सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीको आवश्यकतालाई दर्शाउने प्रयास गरेकी छिन् । केपी ओलीलाई राजनेताको रुपमा यो गीत प्रस्तुत गरिएको छ । राष्ट्रिय सभाकी सांसद समेत रहेकी उनी ओली पक्षको नेकपामा खुलेरै लागेकी छिन् ।
प्रकाशित: २०७७ माघ २० गते १६:२३